लोकसेवामा पनि भनसुन उद्योग ?
लोकसेवामा समावेशिता भएन भनेर आन्दोलन जारी छ । लोकसेवा आयोग परीक्षाको तैयारी गरिरहदा हिजोको सत्ताधारी, आजको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोक सेवा आयोगको स्वच्छता र सक्षमतामा प्रश्न उठाइदिएका छन् । देउवाको अभिव्यक्ति छ– लोक सेवाको लिखित परीक्षा पास भएर के गर्नुहुन्छ ? भनसुन नगरे फेल भइन्छ ?
संसदको प्रतिपक्षीले भनेपछि कसरी नपत्याउने ? लोक सेवा आयोग पनि नेपालको ठूलो भनसुन उद्योग पो रहेछ । लोक सेवा आयोगमा दबाब, प्रभाव चल्दैन, भनसुनले केही हुँदैन भन्ने मान्यतालाई प्रतिपक्षीले खण्डित गरेको छ ।
अचम्म त के छ भने आफूलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थक ठान्ने र त्यही आधारमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष बनेका व्यक्ति देउवाको आरोपबारे केही बोलेका छैनन् । यद्यपि लोक सेवा आयोगको परीक्षा स्वच्छ हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यही विश्वासले संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको साख छ । लोक सेवा आयोगले जसरी पनि यो लोक विश्वासलाई बचाई राख्न सक्नुपर्छ ।
मान्छेका कथाहरु कथा संग्रहको विमोचन कार्यक्रममा सभापति देउवाले लोक सेवा आयोगबारे प्रश्न उठाएका हुन् । भनसुनले लोक सेवा पास हुने भएपछि निजामती सेवा कसरी सेवा मुलुक हुनसक्छ ? सेनाको भर्तीमा १ सय ७६ जना निस्काशन भएपछिको देउवाको कथनले ठूलै सनसनी सिर्जना गरिदिएको छ ।